MFPMF | Myanmar Forest Products Merchants Federation
33rd AFIC Working Committee Meeting and Conference
Myanmr Forest Products Merchants Federation(MFPMF) accepted the responsibility of the ASEAN Furniture Industries Council Chairmanship for the year 2017-2018 right after the 33rd AFIC working committee meeting and conference at (16:30)pm, which had been held on 3rd November 2016, Inya Lake Hotel, Yangon....
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ ASEAN Furniture Industries Council နှင့် EU FLEGT Facility တို့ပူးပေါင်းပြီး Seminar and Conference ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ ASEAN Furniture Industries Council နှင့် EU FLEGT Facility တို့ပူးပေါင်းပြီး နေပြည်တော် တွင် Seminar on “ Bridging the Gap between the ASEAN Furniture Industries and European Market Requirements for Timber” နှင့် “33rd ASEAN Furniture Industries Council Working Committee Meeting & AFIC Conference 2016” အား(1-11-2016)နေ့ မှ (4-11-2016) နေ့ထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ (2-11-2016)ပထမရက်တွင် ကို ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပါတယ်။ (3-11-2016) ဒုတိယရက်တွင် “33rd ASEAN...
Myanmar International Furniture Expo – 2016 ( August)
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်၏ ညီနောင်အသင်းများဖြစ်ကြသော မြန်မာနိုင်ငံကြိမ်နှင့်ဝါးလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းနှင့် သစ်အခြေခံပရိဘောဂလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့သည် နှစ်စဉ် တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ် Myanmar International Furniture Expo ပရိဘောဂပြပွဲကို စီစဉ်၊ ကျင်းပ ပြုလုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ Myanmar International Furniture Expo – 2016 ( August) ပရိဘောဂပြပွဲကို ယခု လာမည့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ၊ ၁၁ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ တပ်မတော်ခန်းမတွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပရိဘောဂပြပွဲတွင် ကုမ္ပဏီစုစုပေါင်း ( ၄၃ ) ခု ပါဝင်ပြသမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းပြပွဲတွင် သစ်အခြေခံ...
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (Forest Sector : What Should Be Done?)
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်း လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောအသင်းတို့မှ ပူးပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်မည့် "Forest Sector : What Should Be Done?" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို အောက်ပါအတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ကျင်းပမည့်နေ့ရက် = ၄-၆-၂၀၁၆ (စနေနေ့)
ကျင်းပမည့်အချိန် = နံနက် (၈း၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၁၂း၀၀)နာရီ
ကျင်းပမည့်နေရာ = IBC, ၆-မိုင်ခွဲ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
“သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အနာဂတ်ခရီး” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
၂၉-၅-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် “သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အနာဂတ်ခရီး” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။...
သစ်တောသယံဇာတများ ရေရည်တည်တံအသုံးချ နှိင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကို ပြောင်းလဲကျင်းပခြင်း
သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးဆောင်၍ "သစ်တောသယံဇာတများ ရေရည်တည်တံအသုံးချနိုင်ရေး" ခေါင်းစဉ်ဖြင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မေလ (၁၂)ရက်နှင့် ၁၃ ရက်များတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားရာမှ မေလ ၁၄(စနေနေ့) နှင့် ၁၅(တနင်္ဂနွေနေ့) ရက်နေ့များတွင် ပြောင်းလဲကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။...
အသင်းသားစုံညီအစည်းအဝေး ပြောင်းလဲကျင်းပမည့်ရက် ကြေငြာခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများအသင်းချုပ်၏ အသင်းသားစုံညီ အစည်းအဝေးအား အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ပြောင်းလဲကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ အသင်းဝင်များ မပျက်မကွက် တက်ရောက်နိုင်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ကျင်းပမည့်နေ့ရက် = ၄-၆-၂၀၁၆ (စနေနေ့) ကျင်းပမည့်အချိန် = ညနေ (၁း၀၀)နာရီ မှ ညနေ (၄း၀၀) နာရီထိ ကျင်းပမည့်နေရာ = IBC (ပြည်လမ်း)၊ ၆ မိုင်ခွဲ၊ ရန်ကုန်မြို့။...
2-5-2016 နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ စာတမ်းပြုစုရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော စာတမ်းပြုစုရေးဆပ်ကော်မတီစာရင်း
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်၏ 2-5-2016 ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ စာတမ်းခေါင်းစဉ် ပြုစုရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် သစ်အခြေခံ စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းနှင့် တန်ဘိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးစာတမ်းအား ပြုစုရေးအတွက် ဆပ်ကော်မတီ အား အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် လိုအပ်သည့် အကြံဥာဏ်များအား အဆိုပါကော်မတီသို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ (က) ဦးသိန်းဝင်း နာယက အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (ခ) ဦးဘာဘာချို အကြံပေး အဖွဲ့ဝင် (ဂ) ဒေါက်တာမျိုးလွင် အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် (ဃ) ဦးစိုးမော် အကြံပေး အဖွဲ့ဝင် (င) ဦးသိန်းထိုက်ဦး အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် (စ) ဦးသိန်းချီ အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် (ဆ) ဦးစိုးဘလှိုင် ...
၁။ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးစီးကာ ၂၀၁၆ခုနှစ် မေလ (၁၂) ရက်နှင့် (၁၃)ရက်များတွင် သစ်တောသယံဇာတများရေရှည် တည်တံ့အသုံးချမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောထွက်ပစ္စည်း လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်အနေဖြင့် သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် တန်ဘိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာတမ်းတစ်စောင်ဖတ်ကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ စာတမ်းတွင် ပါဝင်သင့် ပါဝင်ထိုက်သည့်အချက်အလက်များအား အသင်းဝင်များအနေဖြင့် စာတမ်းပြုစုရေး ဆပ်ကော်မတီသို့ အကြံပြုတင်ပြနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ၂။ အဆိုပါစာတမ်းတွင် အသင်းသားများအကျိုးစီးပွားအတွက် ပါဝင်သည့်ပါဝင်ထိုက်သည့် အချက် အလက်များပါဝင်စေရေးအတွက် လိုအပ်သည်များပြင်ဆင်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် အောက်ပါအတိုင်း အစည်းအဝေးအား ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်သဖြင့် တက်ရောက်နိုင်ပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ (က) နေ့ရက်။ ။ ၂-၅-၂၀၁၆ (တနင်္လာနေ့) (ခ) အချိန် ။ ။နံနက် (၉း၀၀)နာရီ (ဂ) နေရာ ။ ။ MFPMF အစည်းအဝေးခန်းမ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ 7...
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ်သတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ဧပြီ ၂၇ ရက်စွဲဖြင့် ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ်သတ်မှတ်ချက်အား ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်- ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ် ၁ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ၂ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ၃ ဒုတိယသမ္မတ (၁) ၄ ဒုတိယသမ္မတ (၂) ၅ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ၆ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ၇ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ၈ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ၉ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ၁၀ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ၁၁ ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ၁၂ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ၁၃ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ၁၄ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ၁၅ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ၁၆ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ၁၇ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ၁၈ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ၁၉ ဝန်ကြီးချုပ်များ ၂၀ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ၂၁ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ၂၂ တပ်မတော်မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ၂၃ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများ ၂၄ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး အဖွဲ့ဝင်များ ၂၅ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ၂၆ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ၂၇ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ ၂၈ လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီ ၂၉ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ ၃၀ တိုင်းမှူးများ ၃၁ ဒုတိယဝန်ကြီးများ ၃၂...